Malunga nathi -Lingwei Fluid Co, Ltd.
I-Lingwei Fluid isekwe ngabantu abanezivalo zokwenza ulwazi, ngenjongo yokuyila kunye nokwakha iindawo zevalvethi zokunceda iipayipi zombhobho zisebenza ngokuzinzileyo.
Ishishini lethu liqala ngokwakha amanqanaba abenzi bevelufa abadumileyo, emva koko uluhlu lwemveliso luyandiswa kubandakanya intwasahlobo yokubuya okuzenzekelayo, iinyawo ezixhasa iivelufa, iivalves Ukuphakamisa iingalo, izibambo zevalve (izibambo ezinobungqina bokuqhushumba), iivili zesandla sensimbi esingenasici ngenxa Ukukhula kweshishini levalve.
Abantu baseLingwei bajolise kubathengi, imveliso yethu ihambelana neemfuno zomgangatho wevalve wabasebenzisi bevalve. Kwaye iinjineli zethu zigalela amandla ngakumbi ekubumbeni kwakhona uyilo kunye nemveliso ukusinceda ukuhambisa izinto ezikumgangatho ophezulu ezamkelwa kakuhle ngabathengi.
Siyayonwabela intsebenziswano yexesha elide kunye nabenzi bevalve ezahlukeneyo ukubanceda ukunciphisa uhlahlo-lwabiwo mali ngokubonelela ngomgangatho olungileyo kunye nezinto zokuhambisa ngokukhawuleza.
Ixesha liya kulibona ishishini laseLingwei liqhubeka nokukhula ngokufumana amanye amathuba oshishino, kwaye unganguye lowo.
Ngenxa yodidi oluphezulu lwemveliso ebonelelweyo, sikrola indawo eqinileyo kwisizinda. Iimveliso ezinikezelwa sithi ziyahambelana nemigangatho yemizi-mveliso kwaye zinikwa ngamaxabiso afikelelekayo. Iingcali eziqeshwe sithi zityala iiyure zazo zokusebenza ezinde kwimveliso yokuvelisa ngokweenkcukacha zabathengi kunye neenkcukacha zokuhlangabezana neemfuno zabo.
Siqeshe iqela elinetalente leengcali. Iingcali zethu zisebenza nzima ukuze zazi iimfuno zabaxhasi. Kunye noku, amalungu eqela lethu ahlala engxoxo nabathengi ababanceda ukuba babonelele iimfuno zabo ngqo.
Oku kulandelayo zizinto ezinegalelo kwimpumelelo yethu:
● Uluhlu oluqinisekiswe ngumgangatho
● Uthungelwano olubanzi
● Amava amaninzi kwimizi-mveliso
Abanye babaqeqeshi abasebenza nathi zezi zilandelayo:
● Abahlalutyi beMigangatho
● Abasebenzi abanezakhono nabanezakhono ezingaqhelekanga
● Abaphathi beNtengiso neNtengiso